राजा ज्ञानेन्द्रकी नातीनी पूर्णीका शाहको छोटो कथाः ‘खुसी केलाई मान्ने?’ – Sidha Onlinepatra
मुख्य पृष्ठ /Intresting/राजा ज्ञानेन्द्रकी नातीनी पूर्णीका शाहको छोटो कथाः ‘खुसी केलाई मान्ने?’
महिलाले भनिन्ः होइन यी त सबै मलाई नचाहिने पुराना भाँडाकुँडाहरू हुन् ! पुरानो सामानवालालाई दिनको लागि त्यहाँ थुपारेको हो !कामवालीले फ़ेरि भनिन्ः मेडम, यदि तपाइलाई नराम्रो लाग्दैन भने यी मध्ये केही मैले लग्न सक्छु ?महिलाले भनिन्ः केही मात्र किन? तिमीलाई इच्छा भए सबै लग्न पनि सक्छौ !
भिखारीले भन्योः के तपाईलाई अंखरा चाहिदैन ? नचाहिने भए म लान सक्छु ?कामवालीले भनिन्ः लग्नु, लग्नु ! अंखोरा मात्र होइन इच्छा भए बाहिरका सबै भाँडाकुँडाहरू समेत लग्न सक्छौ !